Google ayaa loogu talagalay Nexus goolkii ugu weyn ee la siiyo dagaal adag u diray hoggaamiyaha ka mid ah suuqa premium maanta ee mobile phone, iPhone Apple ah. Shaki kuma jiro in Nexus ayaa istaagay xoog dagaalka, waxaana uu badan samaysay ay shaqo. Si kastaba ha ahaatee, sida ugu saaxiibbaday, haddii aad aad u go'aansaday in la gaarsiiyo in qalab macruufka ah, qodobkan cadayn doono inuu yahay arrin waxtar leh sida aad ka heli doonaa sida ugu fiican ee wareejinta xogta aad ka phone jir Google Nexus oo dhan si aad u macruufka cusub qalab. Hadda, waa inaan iraahdo xogta kala iibsiga u muuqan kartaa sida geeddi-socodka sahlan si kastaba ha ahaatee marka ay tahay in la sameeyo inta u dhaxaysa labadan qalab, ma aha. Waxaad la kulmi karaan caqabadaha halka helitaanka xogta aad ka soo dhaqaaqay Google Nexus in qalab macruufka ah, ka dib markii qaar ka mid ah sababaha aasaasiga ah waxaa loogu talagalay.
Qalabka 1. Google Nexus iyo macruufka gebi ahaanba ka duwan mid ka mid kale, sida ay ku salaysan yihiin nidaamyada hawlgalka oo kala duwan.
2.Both shirkadaha bixiya kaalmo yar oo la siiyo macaamiisha ay la kala iibsiga ee xogta u dhexeeya qalabka ay
Hadda, i sii daa aan idiin keenay war wanaagsan. Xaqiiqda ah in kala saarayaasha meel aan weligeed xiiso u samaynta wareejinta xogta u dhexeeya qalabka ay geedi socod dhib kama badan oo ka mid ah dhinacyada 3aad ka dhigaayo versions iyaga u gaar ah qalabka wareejinta xogta u adeega ujeedada. Mid ka mid ah qalab sida in aan soo ogaaday in ay ugu kale ugu dhex leeyahay wax ku ool ah oo xusid mudan waa MobileTrans ka Wondershare. Beauty of qalab tani waa xaqiiqada ah in ay tahay aalad wareejinta xogta mid ka mid click in sameeya shaqada 100% ammaanka oo aan wax khatar ah. Maxay ka dhigan tahay in uu yahay in haddii aad xogta ka soo telefoonka jir wareejiyo si aad qalab cusub ee telefoonada gacanta la isticmaalayo qalab, had iyo jeer waxay xaqiijin doontaa in aad lumiso xogta ku lahayn nidaamka oo dhan ka mid ah wareejinta xogta. Hadda, waxaad qaadan kartaa wax walba, ka ugu muhiimsan in waxyaabaha ugu yaraan u muhiim ah in aad telefoon jir, Nexus Google, oo ay ku jiraan sawirrada, xiriirada, video, music, fariimaha, barnaamijyadooda, jadwalka iyo Guda yeedha, iyadoo la kaashanayo kaliya ee 1 click, oo la mid ah lagu wareejiyo si aad qalab macruufka cusub.
Halkan link si ay u soo baxdo iyo rakibi qalab cajiibka ah:
Labada talaabooyin fudud inuu u dhaqaaqo xogta laga Google Nexus in macruufka Devices
Bilow isku xira qalabka, Google Nexus iyo qalab macruufka ah, si aad u computer. Qalab hadda waa in si toos ah iyaga la ogaado iyo in ka dib markii ay u muujiyaan "Source" iyo "Destination 'sida. Just loo hubiyo in qalabka macruufka la soo bandhigay sida "Destination 'iyo Google Nexus bandhigo" Source "sida.
Talaabada 2: Transfer xogta qalab macruufka ka Google Nexus
Iyadoo qayb ka ah kii labaad, iyo tallaabada ugu dambeysa, eegno liiska soo bandhigay by qalabka MobileTrans iyo in la hubiyo in aad la doortay oo dhan alaabta in aad u baahan tahay dhaqaaqay waxaa lagu soo bandhigaa in qalab iyo guji badhanka 'Start Copy' si ay u bilaabaan dhaqaaqin macluumaadka oo dhan si aad qalab macruufka cusub. Tani waa in la furto bar horumarka ay tahay in uu kuu sheego waxa boqolkiiba xogta ayaa la koobiyeyn ah. Marka suuqa kala iibsiga la dhammeeyo, si fudud aad u leedahay in guji "OK 'si loo dhamaystiro hawsha.
Waxaa aad u tagto, hadda si fudud aad u cusboonaynta kartaa jir phone Google Nexus u qalab macruufka ah oo cusub oo aan weli ka maqnaan doona on kasta oo macluumaadka, waxay noqon photos, xiriirada, fariimaha, music ama videos. Iyo, haddii ay dhacdo aad ka fekereyso dhammaan xogta ka macruufka qalab si Google Nexus wareejinta, ha ka welwelina sidii MobileTrans ka Wondershare sidoo kaa caawin karaan in.
Sidaas, oo iPhone ayaad isticmaashaa hadda?
1. 6s iPhone More
3. More iPhone 6
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus in macruufka Devices